नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति कमजोर हुनुका कारण « LiveMandu
२ माघ २०७७, शुक्रबार २२:०६
प्रचण्डले भने : राष्ट्रपतिलाई हटाउँदैनौँ, ओलीसँग सहकार्य गर्दैनौँ
विश्वमा कमजोर क्रयशक्ति भएका मुद्रामध्ये नेपालको मुद्रा पनि पर्दछ। नेपाली मुद्राको क्रयशक्ति यतिसम्म कमजोर छ कि सबैभन्दा तल्लो एकाइको नेपाली मुद्रा, रु १ को बजारमा कुनै किसिमको क्रयशक्ति छैन। विनिमय शक्ति छैन। त्यसको आफ्नै एकल, स्वतन्त्र विनिमय अस्तित्व छैन। बजारमा रु १ भुक्तान गरेर कुनै कुरा खरीद गर्न सकिंदैन। यस्तै स्थिति रु ५ को पनि छ। रु १० को स्थिति पनि कमजोर नै छ। रु २० बाट भने केही कुरा खरीद गर्न सकिन्छ तर पनि ज्यादै सीमितरूपमा। केवल रु १०० को मात्र गतिलो क्रयशक्ति छ। रु १००० ले मात्र ज्यादै बलियो क्रय शक्ति राख्दछ। यस्तो किन भएको होला? आउनुहोस् यसको कारण अर्थशास्त्रका पेंचिला सिद्धान्तहरूबाट होइन, सामान्य परिभाषाबाट बुझौं। साधारण चिन्तनबाट बुझौं। सामान्य छलफलबाट बुझौं।
Causes of Low Purchasing Power of Nepalese Currency
त्यस्ता धेरै कुरा छन् जुन नेपालमा नै उत्पादन गरेर एकातिर आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ, अर्कोतिर भारतसितको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा हुने व्यापार घाटा कम पार्न सकिन्छ। जस्तै, नेपाल अहिले ‘अटोमोबाइल’ को लागि अति भरपर्दो बजार हुन पुगेको छ। नेपालले प्रत्येक वर्ष ठूलो परिमाणमा भारतबाट मोटरसाइकल, कार, जिप, ट्रक, बस, टेम्पो, ट्रेक्टर खरीद गर्छ। यसरी ठूलो परिमाणमा यातायातका यी साधन खरीद गर्दा नेपालबाट ठूलो मात्रमा नेपाली एवं नेपालले कमाएको विदेशी मुद्रा भारत जाने गर्दछ। अटोमोबाइलका लागि नेपाल भरपर्दो बजार हुनुको फाइदा नेपालले होइन, नेपाली व्यापारीले होइन, भारतले, भारतका व्यापारीहरूले उठाइरहेका छन्। हामी भने टुलुटुलु हरेर बसेका छौं। यो स्थितिलाई हामीले आफ्नो नालायकी भन्ने वा दुर्भाग्य?
उदयपुर, फागुन १५ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले राज्यले सहजीकरण गरेमा निजी क्षेत्रमार्फत छोटो समयमा धेरै
काठमाडौं : गायक सत्यराज आचार्यको नयाँ गीत सार्वजनिक भएको छ। ‘म बाँच्नुको’ बोलको गीत शुक्रवार युट्युब रिलिज भएको हो। गीतमा
काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई महाराज ठान्ने
‘ट्‌विटर’ बोरिङ भएको भन्दै आफ्नै साइट सुरु गर्ने ट्रम्पको तयारी
वासिंटन । अमेरिकाका पूर्वराष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत महिना आफूलाई निकालिदिएदेखि ट्‌विटर अत्यन्तै ‘बोरिङ’ भएको र यसले लाखौँ प्रयोगकर्ता गुमाइसकेको बताएका